Maldives aimbova mutungamiriri wenyika Gayoom akasungirwa mhosva ine chekuita nekushanya
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Maldives aimbova mutungamiriri wenyika Gayoom akasungirwa mhosva ine chekuita nekushanya
Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Investments • Maldives Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Vatsvagiri veMaldives vakawana $ 1 miriyoni mune aimbova mutungamiri wenyika Abdulla Yameen Abdul Gayoom akaundi yebhangi inonzi yakabatana nechibvumirano chekuhaya zviwi zveveruzhinji zvekuvandudza zvekushanya muMaldives.
Abdulla Yameen Abdul Gayoom aive mutungamiri wechitanhatu weMaldives kubva 6-2013. Akasiya hofisi munaNovember 2018, 17, mushure mekukundwa musarudzo paakange achitsvaga mamwe makore mashanu. Aive nhengo yeProgressive Party. Akashanda seGurukota rezveKushanya uye Zvekufambisa Anga muna 2018 pasi pemutungamiri Maumoon Abdul Gayoom.
Muna 2015 akataura kune 27th musangano wekubatana weUNWTO Commission yeEast Asia nePacific yakaitirwa kuMaldives Bandos Island Resort uye Spa Chikumi 3-5.
Musi wa28 Gunyana 2015, kuputika kwakaitika mungarava yemutungamiriri wenyika 'Finifenmaa' yakatakura Yameen nemukadzi wake pamwe nevakuru vakuru vehurumende kubva kuchitsuwa cheairport Hulhulé sezvo yakanga yave pedyo nekumira panhandare yemutungamiriri wenyika, Izzuddeen Faalan kuMalé. Yameen akapunyuka asina kukuvara, asi mukadzi wekutanga, mubatsiri wemutungamiri wenyika, uye murindi wevaronda vakakuvara Mukadzi wekutanga akasara akatsemuka mudiki uye akamiswa muchipatara.
Nezuro Yameen akapomerwa mhosva yekubiridzira mari achipomerwa mhosva yekuba mari yeMaldives Marketing nePublic Relations Corp.
Mapurisa anoti vanoferefeta vakawana madhora miriyoni imwe muakaundi yebhangi yaYameen inonzi yakabatana nechibvumirano chekubhadhara zviwi zveveruzhinji mukusimudzira kwekushanya muMaldives, nharaunda yeIndian Ocean inozivikanwa nenzvimbo dzayo dzekutandarira.
Mutungamiri Ibrahim Mohamed Solih akamitisawo makurukota maviri eKhabhinethi Ahmed Maloof naAkram Kamaludeen vanodarika zviuru makumi matatu zvemadhora zvinonzi zvakawanikwa mune imwe yenhoroondo dzavo kubva pachibvumirano chimwe chete chekuvandudza nzvimbo.
Muchuchisi wenyika Aishath Mohamed akati magwaro airatidza kuti Yameen akaedza kufurira vafakazi uye akavapa mari yekuchinja zvirevo zvavo.
Achitaura nezvechirevo ichi, Mutongi Mukuru Ahmed Hailam akarayira kuti Yameen achengetwe muhusungwa kusvika kupera kwekutongwa.
Vazhinji vevadzivisi vezvematongerwo enyika vaYameen kusanganisira munin'ina wake, Maumoon Abdul Gayoom vakasungwa panguva yekutonga kwaYameen zvichitevera kutongwa kwakashoropodzwa zvakanyanya nekuda kwekushaya nzira kwayo.
Mumwe aimbova purezidhendi, Mohamed Nasheed, uyo akapedza gore ari mutirongo pamhosva yechigandanga pasi peYameen asati akunda hupoteri muBritain, akadzokera kuMaldives mushure mekukundwa kwaYameen. Dare Repamusorosoro rakabvisa kutongwa kwake munaNovember.